NDỊ MGBANYA NA AHỤRỤ NA-AHỤ MAN 28 - JUNE 3, 2017 GENERAL PSYCHIC WEEKLY Reading - Online psychic reading
Ịgụ akwụkwọ ọgụgụ mmụọ nke oge a > Videos > NDỊ MGBE NA-ECHICHE NA AHỤ NA-AGBA 28 - JUNE 3, 2017 GENERAL PSYCHIC WEEKLY READING
NDỊ MGBE NA-ECHICHE NA AHỤ NA-AGBA 28 - JUNE 3, 2017 GENERAL PSYCHIC WEEKLY READING
Megan Nwere ike 27, 2017 Videosakpado aquarius, aries, cancer, capr ..., kwa, ahọrọ, Gemini, enwu, isis, Leo, libra, osiris, Pisces, psychic, ọgụgụ, sagittarius, chaa, tarot, taurus, virgo, -enwe kwa izu3 Comments na DIVINE UNION & SACRED MEE 28 - JUNE 3, 2017 GENERAL PSYCHIC WEEKLY READING
FYI M DOPPED "TWIN FLAL". M BỤRỤ MGBE NDỊ MGBE NA-AGBANWE MGBE NDỊ VIDIO M
"Ejiri ọkụ ejima" bụ nwoke e mere, ihe karịrị & na-ejighị ya eme ihe, akara aha niile. Ezigbo mmadụ nke echiche a na-enweta bụ ndị a họpụtara ahọpụta na nke ndị ahụ, karịchaa, ndị na-egbuke egbuke, ndị nwere ìhè. Ọzọkwa, Jizọs kwuru banyere "mkpụrụ obi abụọ" nke Chineke jikọtara ọnụ na anyị ka anyị ghara ikwe ka mmadụ ọ bụla dọwaa. Lee Baibul, Torah, Quran, Kabbalah na Akwụkwọ Nsọ ndị ọzọ na ihe odide oge ochie n'ụwa niile. Ị ga-ahụ ndị na-enwu enwu, ndị ọkụ na ndị a họọrọ. Ị gaghị achọta Twin Flame ~ Me
A dịghị etinye ndị mmụọ ọjọọ maka Nzukọ Chineke na Njikọta Chineke ọzọ abụghị maka ndị mmụọ ọjọọ. Nkpughe 13 na-ekwu banyere ịbaba ha na abyss ọkụ na nna ha ma si otú a gosipụta nke a. Ọ bụrụ na ị bụghị nke Ìhè, anaghị m agụ maka gị
Nduzi m & Ana m ekele ma na-ekele gị maka ikiri, mmasị, ịza ajụjụ, ịkekọrịta & denye aha. Namaste ndị mmụọ ozi
Biko kwado vidio ndị na-abịa n'ihu na free agụ site na inye onyinye m
Paypal & / ma ọ bụ Patreon
Chọta otu Indigo Chick tee na ndị ọzọ na Indigo Chick
Patricia V. ekwu, sị:
May 27, 2017 na 5: 19 pm
Queenofswords ọgụgụ dị mma dị ka mgbe niile. Mgbe m nwesịrị ozi ọjọọ site na DM banyere ịkwaga ebe ọzọ maka ọrụ ụnyaahụ (anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ) anwụrụ m. Nke ahụ bụ nanị ụzọ anyị si ahụ obere 10 min ahụ na ihe m chọrọ ịla n'ụlọ ma malite mmalite ya. Agwara m ya na nso nso a na enwere m uche ya, ma ọ na-eleghara okwu m anya ma wepụkwa ihe ọjọọ ahụ, ugbu a ka m maara ihe kpatara ya, ụjọ ji ya. O kwuru na nne ya na-ahapụ ezinụlọ ya n'otu oge, na n'oge ọzọ, ọ na-atụ egwu m, mana m gwara ya otú m ga-esi bụrụ onye na-atụ egwu ya n'ihi na m na-agwa ya site na mmalite otú obi dị m ya, mgbe ọ na-ekwu ihe ọ bụla. Enweghi m ike igosi onye ọ bụla ngwa ngwa m, karịsịa banyere ịhụnanya maka onye ọ bụla, naanị ya. Na-ekpe ekpere kwa ụbọchị na DM ka m buru n'uche ihe nile m kwuru site na obi m nakwa na o mechara gwa m ihe ọ na-eche n'ime obi ya banyere m, mee ka ọ kwuo otu ihe ahụ ọzọ, lol. Ọgụgụ ọzọ dị mma echeghị m na m ga-ahụ otu taa, na-abịa YouTube ka ị gaa peek na bam !!! lee ya. Daalụ ? namaste
Paulette Kelly ekwu, sị:
Anyị nwere ekele maka ozi gị ị nyere anyị. Mụ onwe m na-ahapụ onwe m n'ihe ndị ọzọ gwara m ka m mee ebe ọ bụ na echeghị m na m ruru eru / ikikere iji mee nke ahụ. Ana m enwe obi ụtọ n'ihi na ụbọchị ọmụmụ m dị na 4th. Nwa m nwanyị gwara m na nke a ga-abụ ụbọchị ụbọchị ọmụmụ kacha mma !!! !!! Amaara m na m na-eche ngbanwe ahụ. Enweghị ike ichere iji hụ ihe merenụ
sophie W ekwu, sị:
Nanị 2-3 ka m bụ, m kwenyekwara. E kwuru nke ọma. N'oge gara aga, anọla m ndị na-agụ akwụkwọ, e nyekwara m akụkọ ụgha, mgbe ahụ, ị ​​na-eche n'echiche ahụ na eziokwu dị na ihe ha kwuru nke na-akpata obi abụọ na egwu na ọ bụ aghụghọ. Enwere m obi ụtọ na m nwere akwụkwọ abụọ dị ịtụnanya na gị. Ekwenyesiri m ike na m ga-enwe ọzọ n'ime ọnwa ole na ole lol?